ENUGWU:ÒTÙ GREEN ENVIRONMENT NETWORK AMALITEWO ỊKỤ IHE KARỊRỊ ÓTÙ PUKU UKWU OSISI – hoo!haa!!
Enugwu: Òtù Green Environment Network nọrọ ụnyahụ malite ịkụ ukwu osisi karịrị ótù puku n’okporo Ụzọ, Zik’s Avenue, Enugwu, iji mee ncheta ụbọchị Gburugburu nke Mbaụwa na-abụ n’abalị ise nke ọnwa Juun kwa afọ.
Onye malitere mmemme ịkụ ukwu osisi ahụ bụ Kọmishọna Enugwu Steeti na-ahụ maka Mgbasa Gburugburu nakwa Akụ dị n’ime ala, Hon. Chijioke Edeoga, onye nke Mazi Ifeanyi Nwaobodo, Onyeisi ngalaba na-ahụ maka ‘Ecology’ na mịnịstrị nọchitere anya ya.
Mazị Nwaobodo toro òtù Green Environment Network maka mbọ ha na-agba makak ọdịmma Enugwu Steeti na nke Naịjiriya.
“Obi dị m ụtọ nke ukwuu ịhụ ndị ntorobịa wepụtara ohere ime ha ga-abaara obodo uru.
” Anaghị ahụ ihe dị òtù a ụbọchị nile ”
O kwekwara nkwa na Gọọmenti Enugwu Steeti ga-enye ndị òtù ahụ nkwa zuru oke.
N’okwu ya n’oge ahụ, Onyeisi òtù ahụ, Dọkịnta Daniel Onyedikachi Ugwu kwuru na Atụmatụ Ịkụ osisi ahụ so na mbọ òtù ahụ na-agba iji chekwaa ala site na ime ihe ndị na-echekwaba Gburugburu n’Enugwu Steeti nakwa na Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda nile.
Ndị ọzọ sonyere na Mmemme ahụ gụnyere Nnukwu Onye Enyemaka Gọvanọ Steeti ahụ n’okwu banyere Gburugburu, Ichie Osita Ikeogu, nakwa onye nnọchiteanya ụlọ ọrụ Albertina, ndị sokwa were kụọ osisi n’ótù n’ótù.
Previous Post: “FULANI, KWAPỤNỤ N’ỌHỊA NILE DỊ N’ALA-IGBO UGBUA!” – IGBOAYAKA
Next Post: A KPỤPỤWO ONYE A SỊ KWUTỌRỌ GỌVANỌ ỤZỌDỊMMA NA FACEBOOK ỤLỌIKPE MAKA IYI ỌHA EGWU